Nirihaja miresaka ny Kirimba 2 amin'i Toetra Rája - Pôetawebs.
Nirihaja, poety vehivavy, dia mivelatra eo anivon'ny Faribolana Sandratra. Resahina matetika ao amin'ny tambazotra sosialy izy ankehitriny noho ny hetsika antsa tononkalo antsoina hoe KIRIMBA 2 hatrehiny rahampitso sabotsy 25 novambra 2017. Mivahiny eto amin'ny Poetawebs izy ary manazava ny momba io lohatenin'ny hetsika io.
Nirihaja, miarahaba sy misaotra anao. Omena anao ny fitenenana.
Ny KIRIMBA dia tenin-jatovo midika hoe: mandehandeha, itsangatsangana, mihodina… Tamin’ny Taona 2002, Volana mey ny KIRIMBA voalohany. Famerenana sy fanohizana ny tany amin’ny 15 taona lasa izany ity Kirimba 2 ity.
Inona no anton'ny nisafidiananao an-dRanoe amin'ny hetsika?
Fomba fifampitondran’ny mpiraifaribolana Sandratra ny hoe “mifanome hasina ny zoky sy ny zandry” ka ny zoky no mitarika ny zandry matetika, tamin’io taona io 2002 io izany dia Nirihaja no nosafidina hiaka-tsehatra niaraka tamin’i Ranöe izay iray amin’ireo mpanorina ny Faribolana Sandratra. Famerenena sy fanohizana izany ito.
Milamina tsara ve ny fanomanana ary mahatsara zavatra ve ny elanelan-taona ao aminareo?
Milamina tsara ny fanomananana. Efa mipetrapetraka avokoa ny zavatra rehetra ilaina. Rahampitso sisa andrasana. Eo amin’ny soratra, tsy misy ny elanelan-taona. Afaka mifampaka toerana tsara ny asa soratr’i Ranöe sy Nirihaja. Aleo ny mpijery no asaintsika manao fanatsoahan-kevitra.
Misy mpikanto manampy ve ianareo?
Ny Mpanao teatra avy ao amin’ny Faribolana Sandratra no manampy miantsa, fifandrimbonana efa mahazatra ny mpiraifaribolana, izay tombony lehibe tokoa satria sady maro izy ireo no manan-talenta toa a-ndry Tsitohery, Ratsifa, Nirindra Rafalimanana, Ny Andriniela, Soratra Fanahy, Maneho, Anjara Tsy Ahy, Hery Mandaniaina.
Ny tarika Moajia no mpihira handravaka ny antsa, ho avy hihira ao koa i Ravaka, mpankafy Faribolana Sandratra. Ny tarika Moajia moa dia efa zatra ny Faribolana ihany koa, i elie rajaonarison, raha tsy diso aho, no nampiakan-tsehatra azy ireo voalohany tao amin’ny CGM tamin’izany, nandritra ny seho nataon’ny Faribolana Sandratra. Ny Faribolana Sandratra koa dia mpitrandraka sy mpanome sehatra ireny mpanakanto izay mbola tsy dia fantatry ny olona ireny.
Hisy boky hamidy ve?
Hisy tokoa ny boky hamidy amin’io izay mitondra ny lohateny hoe “KIRIMBA”, boky faharoa. Marihina fa misy ireo tononkalo sy riankalo izay efa hita tao amin’ny boky “Kirimba“ tamin’izany no mbola ho hitanao ao amin’ity “Kirimba” boky faharoa ity.
Hisy hetsika tononkalo iray koa amin'io 25 novambra io ao amin'ny Cemdlac. Mety hisy fiantraikany amin'ny hamaroan'ny mpijery anareo ve izany?
Ny Sabotsy fahefatry ny volana dia efa hatramin’izay no fotoana fanaovan’ny Faribolana Sandratra seho ao amin’ny Cercle Germano-Malagasy. Raha ny isan’ny olona liana amin’ny literatiora malagasy ankehitriny no jerena dia heveriko fa tsy ho ampy azy ireo ny CGM sy ny CMEDELAC.Ny Faribolana Sandratra dia efa manana ny mpanaraka azy rahateo.
Raha atao indraim-bava, inona no tonga voalohany ao an-tsaina raha vao miresaka Ranoe i Nirihaja?
Teny indraim-bava tokoa kanefa mahafehy zavatra betsaka. Nanomboka oviana no nisaloranao ny anarana Nirihaja ary oviana no nanomboka nanoratra tononkalo?
Tamin’ny taona 1993 no nisalorako ny anarana Nirihaja izay taona nonombohako nanoratra ihany koa.
Misaotra Nirihaja nahafoy fotoana nitafatafana taminay. Mirary fahombiazana ho an'ny rahampitso.
Misaotra ny Pôetawebs sy ny mpanaraka ny hetsika toy izao. Rahampitso izany mifankahita an!